Tirinta codadka doorashada Soomaaliland oo bilaabatay – Balcad.com Teyteyleey
Tirinta codadka doorashada Soomaaliland oo bilaabatay
Afhayeenka Guddiga Doorashada madaxtinimada Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulkaasi ayaa uga mahadceliyay shacabka deegaanadaasi, sida ay Codka u dhiibteen.
Waxa uu sheegay Afhayeenku in codeyntu ay u dhacday sidii lopgu tala galay, islamarkaana waajibaadkii saarnaa ay guteen shacabka ku dhaqan deegaanada Maamulkaasi Soomaaliland.
Sidoo kale Afhayeenka Guddiga Doorashada ee Soomaaliland Saciid Cali Muuse ayaa hoosta ka xariiqay in ay bilaabeen tirinta Codadkii la dhiibtay ee Doorashada madaxweynaha Soomaaliland oo la filayo in lagu dhawaaqo saacadaha soo socdo.
Waxaana uu tilmaamay in haatan tirintu ay ka socoto dhammaan goobihii Shalay laga codeeyay ee Mamaulkaasi Soomaaliland.
Doorashada Soomaaliland ayaa shalay ka bilaabatay guud ahaan deegaanada Mamaulkaasi, waxaana ku loo lamaya Xisbiyada Wadani, Kulmiye iyo UCID oo ay u taaganyihiin Musharraxiinta kala ah:-Cabdiraxmaan Cirro 2, Muusa Biixi iyo Feysal Cali Waraabe.
The post Tirinta codadka doorashada Soomaaliland oo bilaabatay appeared first on Ilwareed Online.
MAQAAL: LIXDAN SANO MAR LAGA JOOGO, IYO MAANTA!!
Bil kaddib Qaraxii Zoobbe iyo 54 Qof oo aan raq iyo ruux la hayn